13 Ụmụ Izrel wee malite ọzọ ime ihe jọrọ njọ n’anya Jehova,+ Jehova wee nyefee ha n’aka ndị Filistia+ ruo afọ iri anọ. 2 N’ime oge a, e nwere otu nwoke onye Zora,+ onye si n’ezinụlọ ebo Dan,+ aha ya bụ Manoa.+ Nwunye ya bụ nwaanyị aga, ọ mụtaghị nwa.+ 3 Ka oge na-aga, mmụọ ozi Jehova pụtara ìhè n’ihu nwaanyị ahụ+ wee sị ya: “Lee, ị bụ nwaanyị aga, ị mụtaghịkwa nwa. Ma ị ga-atụrụ ime mụọ nwa nwoke.+ 4 Ma, biko, lezie onwe gị anya, aṅụkwala mmanya ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu,+ erikwala ihe ọ bụla na-adịghị ọcha.+ 5 N’ihi na, lee! ị ga-atụrụ ime, ị ga-amụkwa nwa nwoke, agụba ọ bụla agaghị emetụ ya n’isi,+ n’ihi na onye Naziraịt+ nke Chineke ka nwa ahụ ga-abụ ozugbo o si n’afọ pụta;+ ọ bụkwa ya ga-ebute ụzọ n’ịzọpụta Izrel n’aka ndị Filistia.”+ 6 Nwaanyị ahụ wee gaa gwa di ya, sị: “Ọ dị otu onye nke ezi Chineke bịakwutere m, o yiri mmụọ ozi nke ezi Chineke,+ ọ dị egwu+ n’ile anya. Ma ajụghị m ya ebe o si bịa, ọ gwaghịkwanụ m aha ya.+ 7 Ma ọ sịrị m, ‘Lee! Ị ga-atụrụ ime, ị ga-amụkwa nwa nwoke.+ Aṅụkwala mmanya ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu, erikwala ihe ọ bụla na-adịghị ọcha, n’ihi na onye Naziraịt nke Chineke ka nwa ahụ ga-abụ ozugbo o si n’afọ pụta ruo ụbọchị ọ ga-anwụ.’”+ 8 Manoa wee malite ịrịọ Jehova, sị: “Biko, Jehova.+ Onye nke ezi Chineke ahụ i zitere, biko, ya bịakwute anyị ọzọ ma gwa+ anyị ihe anyị ga-eme nwa ahụ a ga-amụ.”+ 9 Ezi Chineke wee gee ntị n’olu Manoa,+ mmụọ ozi nke ezi Chineke wee bịakwute nwaanyị ahụ ọzọ mgbe ọ nọ ọdụ n’ubi, ma Manoa di ya esoghị ya nọrọ n’ebe ahụ. 10 Ozugbo ahụ, nwaanyị ahụ mere ngwa ngwa gbara ọsọ gaa gwa di ya,+ sị: “Lee! Nwoke ahụ nke bịakwutere m ụbọchị ahụ apụtawo ìhè n’ihu m.”+ 11 Manoa wee bilie soro nwunye ya bịakwute nwoke ahụ, sị ya: “Ọ̀ bụ gị bụ nwoke ahụ nke gwara nwaanyị a okwu?”+ o wee zaa, sị: “Ọ bụ m.” 12 Manoa wee sị ya: “Ka okwu gị mezuo. Olee ụdị ndụ nwa ahụ ga-ebi, gịnịkwa ga-abụ ọrụ ya?”+ 13 Mmụọ ozi Jehova wee sị Manoa: “Nwaanyị a ga-ezere+ ihe niile m kpọtụụrụ ya aha. 14 Ọ gaghị eri ihe ọ bụla si n’osisi vaịn pụta, ọ gaghịkwa aṅụ mmanya ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ọ bụla na-egbu egbu,+ ya erikwala ụdị ihe ọ bụla na-adịghị ọcha.+ Ya debe ihe niile m nyere ya n’iwu.”+ 15 Manoa wee gwa mmụọ ozi Jehova, sị: “Biko, nọtụkwuo ntakịrị, ka anyị gbuoro gị nwa ewu.”+ 16 Ma mmụọ ozi Jehova gwara Manoa, sị: “Ọ bụrụgodị na mụ anọtụkwuo ntakịrị, agaghị m eri nri gị; ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịchụrụ Jehova àjà nsure ọkụ,+ chụọ.” N’ihi na Manoa amaghị na ọ bụ mmụọ ozi Jehova. 17 Manoa wee sị mmụọ ozi Jehova: “Gịnị bụ aha gị,+ ka ọ ga-abụ mgbe okwu gị mezuru, anyị ga-asọpụrụ gị?” 18 Otú ọ dị, mmụọ ozi Jehova sịrị ya: “Gịnị mere i ji ajụ m aha m, ebe ọ bụ aha dị ebube?” 19 Manoa wee were nwa ewu na ọka* chụọrọ Jehova àjà n’elu oké nkume.+ Ọ nọ na-eme ihe n’ụzọ dị ebube ka Manoa na nwunye ya nọ na-ele ya anya. 20 O wee ruo mgbe ọkụ si n’ebe ịchụàjà ahụ nwulie elu, mmụọ ozi Jehova sooro ọkụ nke si n’ebe ịchụàjà ahụ rịgoo ka Manoa na nwunye ya nọ na-ele anya.+ Ha gburu ikpere n’ala ozugbo, kpudo ihu n’ala.+ 21 Mmụọ ozi Jehova apụtaghị ìhè ọzọ n’ihu Manoa na nwunye ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka Manoa matara na ọ bụ mmụọ ozi Jehova.+ 22 Ya mere, Manoa sịrị nwunye ya: “Anyị ga-anwụ,+ n’ihi na ọ bụ Chineke ka anyị hụrụ.”+ 23 Ma nwunye ya sịrị ya: “Ọ bụrụ na naanị ihe Jehova chọrọ bụ ka o gbuo anyị, ọ garaghị anara àjà nsure ọkụ na àjà ọka anyị chụrụ,+ ọ garaghị egosi anyị ihe a niile, ọ garaghịkwa ekwe ka anyị nụ ihe dị otú a.”+ 24 E mesịa, nwaanyị ahụ mụrụ nwa nwoke wee gụọ ya Samsịn;+ nwa okoro ahụ wee na-eto, Jehova wee na-agọzi ya.+ 25 Ka oge na-aga, mmụọ Jehova+ malitere ịkpa ike n’ahụ́ ya, na Mehane-dan+ nke dị n’agbata Zora+ na Eshtaọl.+